တောင်ဆိတ် - ဝီကီပီးဒီးယား
တောင်ဆိတ် (Mountain goat)
တောင်ဆိတ်များသည် အလွန်မြင့်မား၍ ဆီးနှင်းခဲ‌သော ဟိမဝန္တာ‌တောင်၊ အယ်လ်ပ်တောင်တန်း၊ ‌ကော်‌ကေးဆပ်‌တောင်နှင့် ပီးရနီး‌တောင်စသည့် ‌တောင်တန်းကြီးများ‌ပေါ်တွင် ‌နေထိုင်ကြ သည်။ ‌တောင်ဆိတ်အဖိုတို့၏ ဦးချိုများသည် ဓားလွယ် ‌ကောက်ကြီး ၂ ခုနှင့်တူလျက်၊ ‌ရှေ့ဘက်တွင် ‌ဖောင်းရစ်သဖွယ် အထစ်အထစ် ဖြစ်‌နေသည်။ အရှည် လက်မ ၃၀ မှ ၆၀ အထိ ရှိတတ်သည်။ အမများ၏ ဦးချိုသည်ကား ၈ လက်မခန့်သာ ရှည်‌လေသည်။ ထိုသတ္တဝါတို့သည် ‌ရေအမြဲခဲ‌နေ‌သော ‌တောင် အမြင့်ပိုင်းတွင်သာ ‌နေထိုင်‌လေ့ရှိကြလျက် အစာစားရန် သစ် ‌တောမြက်‌တောများရှိရာသို့ ညအချိန် ဆင်းလာတတ်သည်။ ထူထဲ‌သော အ‌မွေးများ‌ကြောင့် အ‌အေးဒဏ်ကိုခံနိုင်သည်။ ‌
အ‌မွေးမှာ အပြာနီ‌ရောင်ဖြစ်၍ ‌ဆောင်းအခါတွင် ပို၍ရှည်လာ သည်။ ‌တောင်ဆိတ်တို့၏ အရပ်မှာ လက်မ ၄၀ ခန့်သာရှိ သည်။ ‌ရှေ့‌ခြေများသည် ‌နောက်‌ခြေများထက်တိုသဖြင့် ‌တောင် ကိုဆင်းရန်ထက် ‌တောင်ကိုတက်ရန် ပို၍လွယ်ကူသည်။ ‌တောင်ဆိတ်များသည် အုပ်လိုက်စု၍ မ‌နေတတ်ကြ‌ချေ။ ဆိတ်မများနှင့် ဆိတ်က‌လေးများသာ အနည်းငယ်စု၍ အုပ်ဖွဲ့‌နေ တတ်ကြသည်။ ဆိတ်ထီးအိုကြီးများမူကား မြင့်လှ‌သော ‌တောင် ထိပ်များတွင် တစ်‌ကောင်တည်း ကျက်စားတတ်ကြသည်။
‌တောင်ဆိတ်ဆိုသည့်အတိုင်း အလွန်မတ်‌စောက်၍ အတက်ရ ခက်‌သော ‌နေရာများတွင် တက်‌ရောက်သွားလာနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အိမ်တွင်ယဉ်ပါး‌အောင် ‌မွေးထား‌သော ‌တောင် ဆိတ်က‌လေးများသည် အိမ်‌ခေါင်မိုး‌ပေါ်သို့ပင် တက်၍ကစား တတ်ကြသည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ အဲ့လပ‌တောင်ကုန်းများရှိ ‌တောင်ဆိတ်များကို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ကြသဖြင့် နည်းပါးသွား ကာ၊ မျိုးဆက်ပြတ်လုမတတ်ရှိ‌နေ‌သော‌ကြောင့် အစိုးရတို့က မပစ်ခတ် မသတ်ဖြတ်ကြရန် ဥပ‌ဒေဖြင့် တားမြစ်ထားရလေသည်။
↑ Festa-Bianchet, M. (2019). "Oreamnos americanus". IUCN Red List of Threatened Species 2020. IUCN. |volume= / |date= mismatch
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တောင်ဆိတ်&oldid=716502" မှ ရယူရန်